Baidoa Media Center » Dalka Masar oo maanta looga dareerey doorashadii baarlamaaka.
Dalka Masar oo maanta looga dareerey doorashadii baarlamaaka.
November 28, 2011 - Written by Abdi - Edited byadmin Dalka Masar oo dhamaadkii sanadkii hore ilaa hada ay ku bateen banaanbaxyo soo noqnoqdey ayaa maanta waxaa ka bilowdey doorashadii baarlamaanka tan iyo markii laga tuurey xukunka Hosni Mubarak oo ka ariminaayey dalkan Masar mudo ka badan 32 sanadood.
Doorashadan maanta ka bilaabatey dalkan Masar ayaa lagu tilmaamaa iney tahay doorashadii ugu horeysey oo ay masaarida si xur ah ay codkooda ku siinayaan qofkey u arkaan inuu wadankaan wax badan ka bedeli karo hadey ahaan laheyd dhan dhaqaale iyo dhan siyaasad intaba.
Dhinaca kale weli waxaa jiro kumaan kun oo mudaharaadiyaal ah oo weli taagan Tahrir square kuwaasoo dalbanaaya inuu is cazilo waziirkii hore difaaca Share this:ShareLike this:Like Loading...